Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Qalab -dhaliyaha naaftada cusub ayaa ku dhawaaqay Generac Mobile
Generac Mobile, oo ah shirkad hormuud u ah munaaradaha nalalka mobilada, koronto-dhaliyeyaasha, kuleyliyeyaasha, bambooyinka iyo xalalka xakamaynta boodhka, ayaa maanta ku dhawaaqay hirgelinta laba qaybood oo cusub oo naafto ah - koronto-dhaliyeyaasha naaftada MDE330 iyo MDE570, kuwaas oo loogu talagalay in lagu bixiyo fududaynta hawlgalka iyo dayactirka. . Mashiinnada kirada ah ee diyaarka u ah waxay ka kooban yihiin albaabo furi kara oo furan si kor loogu qaado adeegga iyadoo u oggolaanaysa farsamayaqaanku inuu si fudud u gaadho dhammaan goobaha adeegga. Naqshadeynta birta qallafsan iyo dhismaha ayaa u oggolaanaya hawlgalka codsiyada kala duwan, iyadoon loo eegin xaaladaha cimilada.
MDE330 waxa uu leeyahay 9.3L Perkins Tier 4 ee ugu dambeeya mishiinka, halka MDE570 ay isticmaasho 18.1L Perkins Tier 4 matoorka ugu dambeeya. Labada matooradaba waxay bixiyaan tignoolajiyada maaraynta culeyska heerka Perkins Exhaust Temperature Management (ETM), iyaga oo meesha ka saaraya arrinta is-dul-saarista qoyan inta lagu jiro xaaladaha-hooseeya iyo kuwa aan raran, taasoo dhici karta haddii koronto dhaliyaha naaftada uu si khaldan u cabbiro ama ka weyn yahay shaqada. Matoorada ku jira Generac's cusub ee MDE330 iyo MDE570 waxa loogu talagalay in ay ka hortagaan isdul-saarista qoyan iyadoo la kormeerayo lana nidaaminayo heerkulka qiiqa matoorka iyo bixinta kulayl dheeri ah, haddii loo baahdo.
"Generac Mobile wuxuu bixiyaa awood la isku halayn karo oo tagta meesha aad u baahan tahay, siinaya macaamiisha kala-duwanaanta iyo xakamaynta si ay u helaan shaqada - meel kasta oo ay taasi noqon karto," ayuu yiri Aaron LaCroix, maamulaha alaabta, Generac Mobile. "Iyadoo loo marayo injineero horumarsan iyo naqshado hufan oo shidaal ah, cutubyadeenu waxay ogolaadaan waqtiyo shaqo oo dheeri ah iyo waqtiyo adeeg oo dheer si aad ugu sii jirto shaqada muddo dheer, iyadoo shidaal-qaadis iyo dayactir yar ay jirto."
Generac's MDE330 iyo MDE570 waxay la yimaadaan halbeeg leh 500-saacadood oo saliid ah iyo adeeg shaandhayn si loo yareeyo dayactirka iyo hoos u dhaca wakhtiga. Shidaalka awoodda weyn iyo taangiyada DEF waxay u oggolaanayaan wakhti run ah ugu yaraan 25 saacadood ka hor inta aan shidaal-qaadista loo baahnayn, kordhinta soo celinta maalgashiga.
Tilmaamaha ikhtiyaariga ah waxaa ka mid ah kororka awoodda bilaabista mootada, xirmooyinka cimilada qabow iyo ikhtiyaaro qaybinta koronta oo dheeraad ah. Dabacsanaanta kama dambaysta ah, cutubyadan waxaa loo habayn karaa isbarbardhigga, taasoo awood u siinaysa hab la miisaami karo oo awoodda ah.
Koontaroolaha PowerZone® Pro Sync wuxuu ku yimaadaa heerka labada cutub, taasoo u oggolaanaysa isticmaaluhu inuu la socdo waxqabadka oo uu ku sameeyo ogaanshaha unugga. Kantarooluhu wuxuu ku habboon yahay inuu ku yaal dhabarka mashiinka ilaa 5 cagood, 6 inji dhulka ka baxsan nooca la jiidhay si fudud loo galo. Koontaroolaha PowerZone® Pro Sync wuxuu dhigayaa dhammaan kontaroolada mashiinka iyo macluumaadka hal meel, shaashad taabasho midab leh oo si fudud loo isticmaali karo taasoo muujineysa koodka ogaanshaha iyo macluumaadka waxtarka leh.
MDE330 cusub iyo MDE570 waxay diyaar u ahaan doonaan dalbashada iyo xigashada Q4 2021 waxayna diyaar u ahaan doonaan in lagu soo raro Q2 2022.
Warqada cusub ee UNWTO u dirtay wadamada xubnaha ka ah:...